Misintaka vetivety amin’ny COVID-19 ny mpitia boky amin’ny fankalazana ny Dashain amin’ny boky vaovao · Global Voices teny Malagasy
'Tsy ampoka hatrany ny Dashain tsy misy literatiora Nepali'
Voadika ny 29 Oktobra 2020 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, polski, Română , Français, English
Fetibe Dashain & sy boky vaova nadika, Nepal. Saripikan'i Sangita Swechcha
Dashain, izay fantatra ihany koa ho Vijaya Dashami, no iray amin'ireo fetibe haindò lehibe indrindra ankalazaina ao Nepal. Izany no fotoana mahabangabanga an'i Kathmandu sy ireo tanàna hipoka olona izay miandrona any ambanivohiny avy. Fomba iray manavaka ny fankalazana ny Dashain ao Nepal ny fividianana akanjo vaovao, mifaly amin'ny karazan-tsakafo, mitsidika tempoly, miravo miaraka amin'ny fianakaviana, ary mividy boky vaovao ihany koa ny mpitia boky. Isa-taona ny mpanao famoahana manaprinty boky vaovao ary manatontosa fetibe sy foaram-boky ankatoky ny Dashain.
Na dia nanohintohina ny fetibe maro tamin'ity taona ity aza ny COVID-19, dia hita ho mankalaza ny Dashain amin'ny fomba maro ny Nepaley. Mizara ao amin'ny media sosialy ny boky vao novidiany ihany koa ny mpitia boky.
दशैं ?? ? ❤ ? Thank you @kitab_yatra ? pic.twitter.com/RigplypcF7
दशैं ?? ? ❤ ? Misaotra anao @kitab_yatra ?
Tsy feno hatrany ny Dashain rehefa tsy misy literatiora Nepali. Misy ireo vitsivitsy vaovao novidiana, misy ny sasany mila hovidiana.
Vonona aho hitsidika toerana izay tsy ilàko fitarihan-dalana sy torohay corona. Manantena fa hitondra ahy amin'ny hasin'ora sy faritra samihafa ny pejy maro.
1. Isaorana @kitab_yatra tamin'ny firariana #Dashain.
2. voavaky ny boky
4. Vakibokiko manaraka.Isaorana @KhadkaBhupendra
Mankalaza ny fetibe Dashain ihany koa ny Nepali monina ivelan'ny firenena. “Mikasa aho ny hamaky boky nepali vaovao izay nangoniko ho ao anatin'ny fankalazako ny Dashain amin'ny boky,” hoy i Krishna Bajgai, mpanoratra Nepali monina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, tamin'ny Global Voices via telefônina. Nampiany: “Dashain dia izay rehetra momba ny sakafo tsara, akanjo vaovao, fitondrana zava-baovao ho an'ny trano, firavoana miarala amin'ny fianakaviana ho an'ny mpanoratra, inona moa ny zavatra hafa mitondra fifaliana ankoatra ny boky vaovao? Efa ao amin'ny manodidina ao ny Dashain!”
Dikanteny Nepali vaovao
Nahitana famoahana vaovao ny tsenan'ny boky Nepali tamin'ity fetiben'ny Dashain ity izay nahitana fisongadinan'ny boky vao nadika teny.
Book Hill, famoahana Nepali iray, namoaka tamin'ity taona ity ny dikantenin'ny “Uganta: Fiafaran'ny vanim-potoana iray (The End of an Epoch)”, nosoratana tamin'ny teny anglisy avy amin'i Iravati Karve, vehivavy Indiana voalohany anthropology; John Steinback amin'ny “Of Mice and Men” (Amin'ny totozy maro sy lehilahy maro) — ny dikanteny voalohany indrindra amin'ity boky ity amin'ny fiteny Nepali; ary ny “Wa Lampusthva Pala,” avy amin'ny mpanoratra Nepaley Malla K. Sundar, izay nosoratana tamin'ny voalohany tamin'ny fiteny Nepal Bhasha.
Uganta: Fiafaran'ny vanim-potoana iray dia nadikan'i Sujit Mainali. Of Mice and Men dia nadikan'i Ganess Poudel ary ny tantara an-tsoratra Vimukti dia nadikan'i Rajendra Maharjan sy Mahesh Raj Maharjan.
Vao haingana ihany koa ny Book Hill namoaka ny “Satta ra Satya,” angon'andrana miisa 11 avy amin'i William Morris, Antonio Gramsci, Albert Einstein, Bertolt Brecht, William Hinton, Eduardo Galliano, Howard Jean, ary Edward Said, nadikan'ilay mpanadihady ny politika Nepali sady mpanoratra Khagendra Sangraula.
Tamin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny imailaka, nilaza ny lehiben'i Book Hill Atoa Bhupendra Khadka hoe:
Na dia somary nihitsoka aza ny tsenan'ny boky tao anatin'ny roa volana izay noho ny areti-mandringana, dia hita ho mientanentana amin'ny fividianana boky vaovao ny vahoaka ao Nepal tamin'ity Dashain ity. Ny boky “Satta ra Satya” izay vao nivoaka roa herinandro monja aza izay no eo andalan'ny hivoahan'ny fanontana fanindroany noho ny fahalanian'ny boky haingana kokoa noho ny nantenaina.
Mpanao famoahana iray hafa izay vao namoaka lohateny vaovao tao ho ao ny Shangrila Books, ao anatin'izany ny “Kancha Maharani” avy amin'ny mpanoratra Nepali Sheeba Shah. Ny tantara antsoratra dia vao nadikan'i Saguna Shah ho amin'ny fiteny Nepali.
Nantsafain'i Global Voices i Mani Sharma, Mpanorina ny Shangrila Books tamin'ny imailaka, izay nilaza:
Nahazo valiny tsara dia tsara izahay tamin'ity tantara noforonina ity ato anatin'izao fotoam-pifaliana izao. Nitondra fifaliana ho anay izany. Nahazo tamberina avy amin'ny mpamaky fa nitazona ny mampiavaka azy ilay literatiora nadika ho teny hafa ary tsara tsotra izao ny lasitry famoahana amin'ny teny anglisy.
Navoakan'ny Manjari Publications tamin'ity taona ity ny dikanteny Nepali amin'ny “Vaishaliki Nagarbadhu,” nosoratan'i Acharya Chatursen, avy amin'ny fiteny Hindi. Nilaza i Krishna Abiral tompon'i Manjari tamin'ny antso antelefônina tamin'ny Global Voices:
Jenitra tokoa aho mahita ny fitiavan'ny mpamaky ity boky voadika teny ity. Misy boky iray hafa voadika teny koa ao anaty fantsona ao ary manantena izahay hitondra boky maro kokoa ho amin'ny dikanteny Nepali.
Miezaka ihany koa ny mpanao famoahana ny hivarotra ny zo amin'ny boky Nepali ho amin'ny teny anglisy eo amin'ny tsena iraisampirenena, saingy mbola midadasika dia midadasika ny fanamby amin'ny fizarana sy ny fampiroboroboana eny an-tsena. Hoy i Mahesh Paudyal, mpanoratra sady mpikaroka avy ao Nepal tamin'ny Global Voices:
Tsy mbola mahazo fifantohana ampy ny literatiora Nepali ao amin'ny gazety iraisampirenena sy amin'ny toeram-pampianarana ambony. Maro amin'ireo fampianarana amin'ny oniversite lehibe manana sampana literatiora no tsy manonona ny literatiora Nepali ary avy amin'izany tsy misy andry literatiora Nepali lehibe manana fisoloantena amin'ny angontsoratra sy gazety goavana